AO RAHA Gazety Malagasy Online – Fahasalamana	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: Fahasalamana	Miverena Fahapoizinana – Olona 63 nararin’ny sakafo tamina mariazy miara-mizotra(0)
Nanao rano lava omaly ireo olona narary vokatry ny fahapoizinana ara-tsakafo tonga tetsy amin’ ny hopitaly Hjra, Ampefiloha. “Olona nanatrika mariazy miara-mizotra tamina fiangonana iray teny Itaosy ireo narary tonga nanatona hopitaly ireo. Olona an-jatony no nanatrika ny sakafo fanasana saingy ireo 63 ireo ihany no tonga nanatona hopitaly. Misy no nanatona toeram-pitsaboana hafa. Ankizy latsaky ny 15 taona avokoa ny ankamaroany tonga eto amin’ny Hjra », araka ny nambaran’ny Dr Rajemiari- moelisoa Miraho Felaniaina, avy eo anivon’ny sampan- draharaha mpanara-maso ny sakafo, isan’ny nijery akaiky ny marary, tetsy amin’ny Hjra, omaly.
Tamin’ny sabotsy teo no nambaran’ireo marary, tonga tao amin’ny hopitaly, fa nisian’io lanonana mariazy miara-mizotra io. “Ilay sakafo nisy maionezy sy sardine no mety nahavoa ireo olona ireo”, raha ny tombana avy amin’io sampan-draharaha io. “Nokarakaraina talohan’ ny nandehanana namonjy ny fotoam-pivavahana ilay maionezy ka mety izay no nitarika ny fahapoizinana taminay”, hoy kosa ny renim-pianakaviana iray, mbola tsy afaka miteny tsara, tonga nitsabo tena tetsy amin’ny Hjra.
Ny alatsinainy hariva teo no nanomboka niseho tsikelikely ny aretina. Nandoa sy nivalana avokoa ireo olona voany ary voatery notazomina eny amin’ny hopitaly izy ireo, indrindra ny ankizy, ka asiana seraoma. Nisy ihany koa anefa no nalefa nody rehefa hita fa tsaratsara.
Fahasalamana – 90%-n’ny olona voan’ny homa- miadana no mety ho sitrana Azo sitranina ny aretin’ ny homamiadana. “Ny 90%-n’ny olona voan’ny homamiadana no mety ho sitrana raha maharaka tsara ny fitsaboana rehetra”, hoy ny Dr Rabarijaona Léontine, lehiben’ny sampan-draharaha mitsabo ny homamiadana, etsy amin’ny Hjra. Fanentanana ny olona hiroso amin’ny fitiliana no tena mana- mora ny fitsaboana. “Azo tsaboina tsara ny homamiadana raha vao manomboka. Efa lalim-paka anefa ny aretina mahazo ny 75%-n’ny marary vao manatona mpitsabo izy”, hoy io mpitsabo io.
Hisy ny fanamarihana ny andron’ny homamiadana anio sy rahampitso eto amintsika, ka hifantoka amin’ny homamiadan’ ny ankizy ny hetsika fankalazana. Ny 3%-n’ ireo voan’ny homamiadana tonga manaraka fitsaboana, etsy amin’ny Hjra, dia ankizy. Ny homamiadan’ ny ra no mahazo ny 59%-n’izy ireo.
Fahasalamana – Mitombo ireo olona mitondra ny tsimok’aretina Sida « Misoko mangina sady miakatra ny tahan’ny olona mitondra tsimok’aretina Sida », hoy Dr Rabeson Andriantsivolosy Hervé Patrick, lehiben’ny sampan-draharahan’ny fitsaboana, etsy amin’ny Birao monisipaly momba ny fahadiovana (Bmh) Isotry. Misy isan’andro ny fandraisana fitiliana maimaim-poana eny an-toerana. Nisy telo ireo nitondra ny tsimok’aretina tamin’ny janoary teo, tafakatra efatra izany ny febroary ary enina ny volana marsa teo, araka ny tarehimarika azo teny amin’ny Bmh.
Olona avy amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy, amin’ny karazan-taona rehetra, no tonga manao fitiliana ao an-toerana. Misy hatramin’ny ankizy roa taona sy reny bevohoka mitondra izany. Misy ihany koa ireo efa maherin’ny 49 taona ary ireo olona mitsindrona zava-mahadomelina sy ny lehilahy manao firaisana amin’ny lehilahy no tena betsaka.
Nampahatsiahivin’ny Dokotera Rabeson Andriantsivolo Hervé Patrick, izay manaraka ny fitsaboana ireo olona mitondra ny tsimok’aretina Vih, fa tsy mamindra amin’ny olona na amin’ny zaza ao an-kibo ny marary rehefa manaraka tsara ny fitsaboana. « Aretina sahala amin’ny aretina rehetra ny Sida rehefa voatsabo. Mitovy amin’ny diabeta sy ny tosi-dra ihany izy amin’ny fihinanana fanafody mandrapahafaty. Rehefa tsy mihinana ilay fanafody dia mety ho mora voan’ny aretina ary ireo aretina ireo no mety hahafaty fa tsy ny Sida », hoy izy.
Fahasalamana – Efa tonga eto amintsika ny fitsaboana ampitain-davitra Mivoatra hatrany ny teknolojia saingy mbola tsy voafehy kosa ny fanakanana ny aretina. Hanomboka tsy ho ela eto amintsika ny fitsaboana ampitain-davitra amin’ny alalan’ny informatika sy ny “télé médecine”. Hopitalim-panjakana maro- maro no hametrahana izany, ary isan’ny atao filamatra voalohany ny eto Antana- narivo sy Antsirabe ary Toamasina.
Fomba iray ahafahan’ny olona mifanakalo hevitra sy manontany mpitsabo matihanina ho an’ireo olona lavi-toerana ity fomba iray ity. Miaraka aminy ihany koa ny fanaovana fitiliana “échographie” amin’ny alalan’ ny “internet” sy ny finday. “Tsy mila mifindra toerana na mamonjy toeram-pitsaboana ilay marary fa amin’ny alalan’io “télé échographie” io dia efa hita ny soritr’aretina”, araka ny fanavazan’ireo mpitsabo, nandritra ny andro faharoan’ ny informatika momba ny fitsaboana aty amin’ny Ranomasimbe Indianina, tetsy Antsakaviro.
Hisy ny fanofanana mpi- tsabo eto amintsika amin’ ny fikirakirana ity fomba vaovao ity. Ireo mpitsabo nahavita fianarana momba ny fitsaboana, nandritra ny valo taona, no afaka manaraka izany fiofanana izany.
Fahasalamana – Ankizy maromaro nararin’ny ody kankana tany Amparafaravola Nalaza ratsy indray ny hetsika Heri- nandron’ny faha- salaman’ny reny sy ny zaza, tamin’ny herinandro ambony teo, tao amin’ny tanànan’Amparafaravola. Ankizy mpianatra maromaro latsaky ny dimy taona no fantatra fa tratran’ ny aretin-kibo vokatry ny fihinanana ody kankana. “Ankizy maromaro no narary taorian’ny fihinanana ody kankana ongombe hiarovana ny aretin’ny kankandio (filariose).
Ireo ankizy rehetra nihinana izany no tratran’ ny fivalanana ary tsy afaka nianatra. Aretina mandalo ihany anefa ilay izy ary efa voafehy”, araka ny fanamafisam-baovao avy amin’ny Dr Fetra, avy any Amparafaravola. Nisy tamin’ireo ankizy kosa indray no rakotra bontsina menamena ny vatany taorian’ny fihinanana io ody kankana io.
“Nifanindry tamin’ny hetsika herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza (Ssme) ny fanomezana io ody kankana io, fa tsy tafiditra ao anatin’ny hetsika. Misy faritra maromaro ahitana ny aretina kankandio ka nahitana ny fizarana odin-kankana fa tsy avy amin’ny Ssme akory. “Bendazole” no ody kankana nozaraina nandritra ny hetsika ary tsy mampaharary kibo mihitsy”, hoy kosa ny fanavazana nomen’ny dokotera iray, mpandrindra ny hetsika Ssme.
Ody kankana zaraina isaky ny sekoly ity ongombe ity, ary natao ho an’ny faritra mafana nefa be rotsak’orana. Mifindra amin’ny alalan’ny moka ny kankana ary any amin’ ny hoditra no hitoerana sy handehandehanany. “Hetsika efa fanao ny fizarana io ody kankana io aty aminay. Ny fomba nitehirizana ilay fanafody no mety nampaharary ny ankizy nihinana azy. Na izany aza efa voafehy ny aretina”, raha ny fanampim- panazavan’ireo mpitsabo hatrany.
Fahasalamana – Olona am-polony nampidirina hopitaly vokatry ny rivotra Aretina kely tsy ampoizina nefa nampiditra hopitaly. Aretina manomboka mahazo ny maro ny fidiran’ny rivotra any anaty kibo sy vavony. Olona efatra no nisesy tonga tetsy amin’ny hopitaly Befelatanana, ny sabotsy maraina teo, vokatr’ity aretina ity. Nambaran’ny mpitsabo fa efa nisy valo hafa koa niharan’izany tamin’ny herinandro teo.
Tahaka izao ny fitrangany: maloiloy te- handoa foana ny olona rehefa tratrany. Tsy mahatafavoaka rivotra avy eo ka mitarika fanaintainana ao anaty. Io rivotra io no mameno ny vavony ary manempotra, ka mety hahatorana ilay olona voa.
“Vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro no mahatonga ny olona tsy mahazaka ny fidiran’ny rivotra. Mahatorana mihitsy izany rehefa tena be loatra any anaty any, ka izany no hitazonana azy ety amin’ny hopitaly”, hoy ny mpitsabo ao amin’ny sampan-
draharahan’ny fitsaboana kibo sy vavony.
Tsy tsara ny manao fitafiana mangatsiaka amin’ izao vanim-potoana miovaova izao. Tsy mety ihany koa ny mihinana sakafo mangatsiaka. Tsy tokony hohadinoina ihany koa anefa ny fisakafoanana maraina, araka ny toro hevitr’ireo mpitsabo.
Voapoizina ara-tsakafo – Olona 40 narary tao anatin’ ny herinandro Miverimberina, tsy mety foana. Olona manodidina ny 40 indray tamin’ity herinandro ity no fantatra fa voapoizina tamin’ny fihinanana irony karazan- tsakafo mifangaro na « composé », amidy eny amoron-dalana irony, teny Nanisana. «Narary an-doha sy kibo, ary nandoa sy nivalana ny ankamaroany. Nidina nizara fanafody ho azy ireo ny dokotera mpanara- maso eto Analamanga, niaraka tamin’ny ekipany eto amin’ ny Fari-piadidiana ara-paha- salaman’ny distrika. Efa azo ambara fa avotra daholo izy ireo na dia efa nisy aza ny nandamaka be », hoy ny Dr Razafindramonjy Jean, talen’ny sampan-draharaha manara-maso ny kalitaon’ny sakafo, izay eo ambany fiahian’ny mini- siteran’ny Fahasalamana.